စီမံကိန်းမန်နေဂျာများနှင့်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများအဖြေများ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
အဖြေများနှင့်အတူစီမံကိန်းမန်နေဂျာများနှင့်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ:အုပ်စုအနေဖြင့်အခြားတစ်ဦးချင်းစီများဝယ်ယူရန်မနှစ်မြို့ဖွယ်-မှဦးခေါင်းပေါ်လက်သည်းနှိပ် ပတ်သက်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်သိကျွမ်းဘယ်တော့မှ: ဤလူတစ်ဦးချင်းစီဖော်ပြတော်မူမည်လော အုပ်စုနှင့်အတူအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်? အဆိုပါအကျိုးတူများအတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆွ? မေးခွန်းများကို-သို့သော်သင်သည်မှန်ကန်သောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အတူသူတို့ကိုအပေါ်တစ်ဦးအလင်းအရောင်ဖြာနိုင်ပါတယ်များစွာသောသဘောတူညီမှုရှိပါတယ်။
ပွင့်လင်းရာထူးများအတွက်အကျိုးတူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ Talking ငါသေးသောငါက၎င်း၏ရိုးရှင်းသောသည်ဟုမထင်ကြဘူးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါပြီတစ်ခုခုပါပဲ။ သင်ဘယ်လိုမေးလျှောက်သောအရာကိုသိကြပါ့မလား ပိုပြီးင်ဘယ်အရာကိုသင်မည်သို့သာမန်ပုပြိုင်ဘက်အရှိဆုံးစံပြအလငျး၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြသနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးဖို့အမှန်တကယ်အကျဉ်းအချိန်အပိုင်းအခြားသည်အဘယ်အရာကိုအသုံးချရန်မလဲ
1 ။ သငျသညျမှာကွာ chip ဖို့ဘာမလိုအပ်သလဲ?
2 ။ သင်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲစေခြင်းငှါ, ဘယ်လို 1-10 ကနေသကျမှေးလုပျငနျးအဖြစ်အုပ်ချုပ်မှုတိုးချဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့လိုအပျသောဖြစ်ရပ်အတွက်?
3 ။ လုပ်ဖို့အကျိုးတူကြီးကြပ်ရေးမှူးများအတွက်အများဆုံးအရေးပါသောအရာတစုံတခုကဘာလဲ?
4 ။ သင်သည်အဘယ်သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နေကြအများဆုံးစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသလဲ?
5 ။ သင်ဘယ်လိုထောက်ခံသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မလဲ သငျသညျကိုဘယ်လိုတက်ကြီးကြပ်မလဲ
6 ။ အမှတ် at အခါနောက်ဆုံးအချိန်ကိုသင်သဘောတူညီချက်သတ်မှတ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ခဲ့ကြဘူးခဲ့သလဲ
7 ။ သင်တစ်ဦးအကျိုးတူအပေါ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တော့အများဆုံးဒုက္ခကငျြ့ဝတျရှေးခယျြမှုကဘာလဲ
8 ။ အဘယ်အရာကိုစံသင်သည်သင်၏နောက်အလုပ်အကိုင်အနေရာချထားဖို့အသုံးချဖို့နေကြသည်ကိုသင်ပြောချင်ပါသလဲ
9 ။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကုမ္ပဏီတခုမှာအကျိုးတူအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများကိုတိုးမြှင့်ပြီလော
10 ။ သငျသညျအဘယျသို့ဆန်းသစ်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုစနစ်များကိုအသုံးချရန်သလဲ?
ကြောင်းမှ Added ကရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပြောနေတာအကြောင်းကိုစာအုပ်တွေ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သောမြေပေါ်တွင်စံမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတစ်သိသိသာသာအရေအတွက်အဖြေကိုဖွဲ့အစီအမံမှပြိုင်ဘက်များအတွက်ရိုးရှင်းသောင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖြေကိုလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးရှိသည်, ဒါတစ်ခုလုံးကိုအရာလေ့ကျင့်ခန်း ticking တစ်ဦးကွန်တိန်နာများကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ငါအကျိုးတူအကြီးအကဲကူညီမှုကိုရယူရန်အဘို့အကြှနျုပျ၏ 10 အာဏာမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များစုဝေးပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အကျိုးတူအုပ်စုတစ်စုံတစ်ယောက်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ် Next ကိုအချိန်အဘယျကွောငျ့ဤအခြို့ကိုကြိုးစားသည်မဟုတ်လော
ကျနော်တို့သို့သော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလေ့သူတို့အထဲက doled သောတာဝန်များကိုမှာရိုက်ကူးယူတိုးချဲ့များအတွက်ဂရုမစိုက်ပါဘူးအလုပ်အကိုင်မှီခို-bits ရှိပါတယ်: သောမြေပေါ်တွင်ဂရိတ်။ ဒါဟာသို့သော်သင်သည်မသက်ဆိုင်ကြောင်းအကျိုးတူသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းဆုံးဖြတ်ချက်မပေးကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှာဖွေနေပါတယ်, စိတျရှိသည်ဖို့အဆင်ပြေပါသည်။
ရွားလှတုံ့ပြန်မှု: "ငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်ကောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမှာခုန်, ငါပဲအမှန်အဆင့်မြင့်မီဒီယာမြားကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မပြောချင်, OK ကိုဖြစ်သနည်း "
ဂရိတ်ကတည်းက: ဤသူတို့အလုပ်အကိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်သင်မည်သို့မှသရုပ်ပြခြင်းနှင့်မိမိတို့တစ်ဦး pm တွင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်တိုးတက်တွေ့မြင်ရှိမရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကောက်ယူခိုင်လုံသောအဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့ထိုသူတို့ကိုမေးပါ။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောတုံ့ပြန်မှု: "ငါပဲငါတရားဝင်အနေအထားဆင်းသက်နိုင်မီကာလ၌ဖြည့်ရန်ဤလုပ်နေတာပေါ့ကတည်းက 1 ကဂိုးသွင်းချင်ပါတယ်။ "
ဂရိတ်ကတည်းက: ဒါဟာသင်သည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုသရုပ်ပြသူတို့ကယ့်အကျိုးတူအကြီးအကဲဘာစဉ်းစားရပြီရှိမရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာထိုနည်းတူသူတို့သည်သင်၏အုပ်စုအတွက်လျောက်ပတ်သောလူမှုရေးမထိုက်မတန်ရှိမရှိကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးအစိုင်အခဲအာရုံရှိသည်နှင့်သူတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာသငျသှားအဖြစ်ချက်နဲ့ဖြစ်နှင့်ပုံစံများကိုချိန်ညှိရန်ဖြစ်ပါသည်ထင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, ထို့နောက်သင်ဖွယ်ရှိအပေါ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောတုံ့ပြန်မှု: "ကောင်းပြီ, အဲဒါကိုမပြောပါလိမ့်မယ်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲသူအဘို့င်?"
ဒါဟာသင်သူတို့သိမ်းပိုက်ထွက်သယ်ဆောင်မည်သို့နိမိတ်လက္ခဏာကိုပေးသည်: ကတည်းကဂရိတ်။ အဆိုပါ PC ကိုမှာတစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးသုံးစွဲတဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်သင့်ရဲ့အခွအေနေကိုက်ညီစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သင်အထဲကရရှိသွားတဲ့နှင့်ဖောက်သည်ထိုရက်သတ္တပတ်၏အများဆုံးရက်ပေါင်းသွားရောက်သူတစ်ဦးအကျိုးတူစီမံခန့်ခွဲသူကိုရှာစေနိုင်သည်။ သင်ကူညီမှုကိုရယူရန်နေသောပို့စ် fit မသင့်သောအရာတစ်ခုခုကိုနားထောငျသောဖြစ်ရပ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရှေ့တော်၌လျော့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ယခုအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုထက်အခြားကြောင်းတစ်ခု option ကိုပြီးမြောက်ဖို့ကို set up စေခြင်းငှါစိတ်ကိုထားပါ နောက်ထပ်ဒီ။
ရွားလှတုံ့ပြန်မှု: "Facebook က။ "
နည်းလမ်းတက်စီမံခန့်ခွဲသင်သည်ထက် ပို. အကြီးတန်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလို့ရတဲ့ functioning: ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ဂရိတ်။ တိုးချဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဆက်မပြတ်ဤအမှုကိုဒါကြောင့်သူတို့ဆက်သွယ်မှု function ကိုအောင်ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကြီးပါပဲ။
ရွားလှတုံ့ပြန်မှု: "ငါ့ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်ရဖို့မဆီသို့ငါအမှီ။ သူတို့ကမှန်မှန်နေတဲ့ဘက်ကအနုညာတင့်, ဒါကြောင့်ငါမနှောင့်ရှက်သူတို့ကိုလုပ်ပါ။ "
ဒါဟာသင်သူတို့လုံးဝပှငျ့လငျးစှာပွောဖြစ်ခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုဆိုးဆိုးဝါးဝါးထွက်လှည့်မယ့်ကာလကိုရည်မှတ်သငျသညျပညာပေးရန်ချိုသောသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ထွက်အလုပ်လုပ်ကူညီပေးပါမည်: ကတည်းကဂရိတ်။ ဤသည်ကြီးကြပ်မှုနှင့်မည်သို့သူတို့ Over-ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရာမှရရှိ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။ အလုပ်အထုပ်ခန့်အပ်အကျိုးတူအလုပ်အရေးပါသည်နှင့်သင်မသိသူကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကျုံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောတုံ့ပြန်မှု: "ငါလွှဲအပ်-ကဘယ်တော့မှအားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ဖို့လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများပါပဲ။ "
ဒါဟာကျင့်ဝတ်၏ PMI Code ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျွမ်းပြခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သူတို့, အလုပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သူတို့၏ယေဘုယျလမ်းကြောင်းအောက်မေ့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏နိုင်သည်ကတည်းကဂရိတ်။ သငျသညျထိုနည်းတူတစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လဲလှယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်သူတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုသို့ fit ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတရားစီရင်တော်မူရန်သင့်အားခွင့်ပြုပေးရန်ကအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောတုံ့ပြန်မှု: "ငါသူအများဆုံးအကုန်အကျဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်ချိန်ကငါ၏အဝမ်းကွဲဖို့သဘောတူညီချက်ချထားပေးသည်။ ငါသို့သော် kickback ထဲကတစ်လျောက်ပတ်သောအခါသမယတယ်။ "
ဂရိတ်ကတည်းက: ဒါဟာအလုပ်ကိုမှာသူတို့ကိုဖို့အရေးကြီးတယ်င်သင်သည်အဘယ်သို့မှသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်: အစိမ်းရောင်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, အလုပ်အကိုင်လှုပ်ရှားမှု, အလုပ် / ဘဝဒီတော့အပေါ်အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အလုပ်လုပ်, adjust နှင့်။ ဒါဟာထိုနည်းတူသင်သည်သူတို့ထိရောက်စွာကျက်စားအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏မြှင့်တင်ရေးကိုမြင်လျှင်နှင့်ရှောင်ရှား (တစ်ခုခုဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်) မရနိုငျမလားဆိုတာဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိသိစေပါလိမ့်မယ်။
ရွားလှတုံ့ပြန်မှု: "လျော်ကြေး, ကုန်ကျစရိတ်အစီအစဉ်နှင့်ပြည်ပခရီးသွားနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများ။ "
လူတိုင်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် CV ကိုလုပ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေခံ, သရုပ်ြပဆောင်ရွက်ချက်မှာရိုက်ကူးယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်မဟုတ်, သို့သော်လူတိုင်း (မသက်ဆိုင်သူတို့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေ၏အပြောင်းအလဲများအနည်းငယ်အဆိုပြုချက်ပူဇော်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်: သောမြေပေါ်တွင်ဂရိတ် ) အထိယူ။ အတွေးများနှင့်သူအရှေ့သို့သူတို့ကိုထားရန်တွန့်ဆုတ်မဟုတျပါဘူးသူတစ်စုံတစ်ယောက်အဘို့ရှာပါ။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောတုံ့ပြန်မှု: "ဒါဟာအဲဒီမှာအားလုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့ junk င်သေးငါမမှတ်ရှိပါတယ်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့စေရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ "
ဂရိတ်ကတည်းက: မျှော်လင့်ချက်၏အထူးပြုစွမ်းရည်စမ်းသပ်ဒါဟာတန်ရာ။ သူတို့ဟန်ဆောင်, De Bono ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းထုပ်, fishbone ဂရပ်များနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာပြောလိမ့်မည်လော ပန်ကာထွက်သူတို့စိတ်ကူးယဉ်စဉ်းစားအတူအခြေချနေထိုင်သည်လွန်ခဲ့သောအကျိုးတူကိစ္စဆွေးနွေးရန်။
ရွားလှတုံ့ပြန်မှု: "ငါကအုပ်စုအပါအဝင်မပါဘဲပြဿနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သဘောထားကိုရှိသည်။ "
PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - 10 အကြောင်းရင်း PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Get မှ